चैत २८, २०७५
काठमाडौं – रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्र मामिलामा गहिरो अध्ययन र जानकारी राख्छन् । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि लोकतन्त्र स्थापना र गणतन्त्रको समयमा पनि उनी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्कमा रहेन गरेका छन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका पाण्डे जनतामा जाँदा पूर्वराजाले सुरक्षित महसूस गरेको दाबी गर्छन् । लोकान्तर डटकमको ‘लोकान्तर शो’का लागि दिलनिशानी मगरसँगको कुराकानीमा पाण्डेले जनतामा जाँदा पूर्वराजाले सुरक्षित महसूस गर्ने गरेको बताए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता के राजतन्त्र फर्काउने चलखेल हो ? भारतमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेपालसँग सम्बन्ध कस्तो रहला ? नेपालमा लगानी गर्न चीन अझै किन हिच्किचाइरहेको छ ? यी लगायत विषयमा पाण्डेको जवाफ हेर्नुहोस्, भिडियोमा :
समयमै नरोके मुलुक निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्ने खतरा ...